भिडिओ रिपोर्ट : कस्तो बन्नेछ नागढुंगा-काठमाडौं सुरुङ मार्ग? :: Setopati
भिडिओ रिपोर्ट : कस्तो बन्नेछ नागढुंगा-काठमाडौं सुरुङ मार्ग?
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असोज ८
नागढुंगा-काठमाडौं सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य अन्तत: अगाडि बढ्ने भएको छ।
सोमबार जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो र सरकारबीच निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। तर जापानी कम्पनीले भने तिहारपछि मात्र काम थाल्ने भएको छ।
२ दशमवल ६८ किलोमिटर लम्बाइको सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले कम्पनीलाई ४२ महिनाको समय दिएको छ। सरकारले दसैंअघि नै सुरुङ मार्ग शिलान्यासको तयारी गरिरहेको छ।
निर्माण गर्ने कम्पनी टुंगो लागे पनि जग्गाको मुआब्जा विवाद अझै सुल्टिएको छैन।
काठमाडौंतर्फ सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामा रहेका संरचनाहरूको मुआब्जा दिन बाँकी छ।
धादिङतर्फ ४४ रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मूल्य निर्धारण भैसकेको छ। तर जग्गाधनीले अझै मुआब्जा बुझेका छैनन्। सुरुङ मार्गको प्रस्थान विन्दुमा पर्ने वायु गुठीको जग्गाको मुआब्जा अझै निर्धारण भएको छैन। गुठी जग्गा हुनेले निर्धारित मुआब्जाको एक तिहाइ मुआब्जा मात्र पाउँछन्। तर स्थानीय यसमा सन्तुष्ट छैनन्।
धादिङतिरको सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य काठमाडौंसँग सीमा जोडिएको सिस्ने खोलाबाट सुरू हुनेछ। सुरुङ मार्ग काठमाडौंतर्फ चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं १ मा निस्कनेछ। सुरुङमार्ग थानकोट-कलंकी सडकमा फ्लाइओभरमार्फत् जोडिने छ।
सुरुङ मार्ग निर्माण गर्दा दुई वटा सुरुङ निर्माण हुनेछ। एउटा सुरुङमा सवारी गुड्नेछ। अर्को दुर्घटनाको अवस्थामा उद्दार लागायतका कार्यमा प्रयोग हुनेछ। दुवै सुरुङ ठाउँ ठाउँमा भूमिगत रूपमै जोडिनेछ।
सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि जापानसँग नेपालले ४० वर्षका लागि ऋण लिएको छ। दस वर्षपछि नेपालले ऋणको ब्याज तिर्न सुरू गर्नुपर्नेछ। २२ अर्बको आयोजनामा १६ अर्ब ऋण जापानसँग लिइएको हो भने ६ अर्ब रकम नेपालले लगानी गर्दैछ। जापानी ऋणको ब्याजदर ०.०१ हुनेछ।
हेर्नुस्, यस्तो बन्दैछ नागढुंगा-काठमाडौं सुरुङमार्ग -
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ७, २०७६